Haku deg degin Isticmaalka Bacda Galmada (Halkan Ka sii Akhri) | shumis.net
Home » galmada » Haku deg degin Isticmaalka Bacda Galmada (Halkan Ka sii Akhri)
Haku deg degin Isticmaalka Bacda Galmada (Halkan Ka sii Akhri)
Baaritaano lagu sameeyey 180-590 qof oo Rag iyo dumar isuga jira ayaa lagu sheegay in isticmaalka Condoms ka uu waxyeelo badan ugeestay Caafimahadka Labada lamaane ee Ijmaaca sameynaya.
Sida lagu qoray Jariidada Classified ee laga leeyahay wadanka Maraykanka ayaa baaritaankeeda ku cabirtay waxyeelada laga qaado Isticmaalka Condomka kuwaasoo mudooyinkii ugu danbeeyey lagu howlanaa sidii xal waara loogu helaa Ladagaalanka Cudurka faafa ee HIV.
Dr Debby Herbenick,oo ka socda School of Public Health-Bloomington ee dalka India oo baaritaankani qeyb weyn ka lahaa ayaa soo bandhigay cuduro badan oo ay kamid yihiin Raaxo La’aan iyo qanaacada oo dumarka ku yar waqtiga la isticmaalayo Condomka.
“Waa muhiim inaad isticmaasho Condom balse waxaa wanaagsan inaadan ku deg degin isticmaalkiisa kahor dareemahaaga oo aanan kicin sababtoo ahi dumarka laguma qanciyo” Soomaali ahaan waxaan nahay dad Islam ah oo isticmaalkiisu wuu nagu yaryahay waxaase wanaagsan inaadan adeegsan Condom sababtoo ah Wuxuu ku galinaya xaduud kaa xiran , Wuxuu sahal kaaga dhigayaa inaad ku dhacdo Ijmaac qaldan maadaama aadan ka baqaneen cudur.
Cuduradaan badankoodu waa kuwa Carada Alle ku yimaad mana jirto xal dhaw oo looga badbaado wax kugu soo food saaran Dadaalkuna waa lama huraane, Hadaba Baaritaankani oo lagu sheegay in Halisyo badan leeyahay Isticmaalka Condoms-ka ayaa haboon inaad yareyso isticmaalkiisa.
Title: Haku deg degin Isticmaalka Bacda Galmada (Halkan Ka sii Akhri)
Posted by Unknown, Published at April 14, 2017 and have 0 comments